National Park Pampa de Tamarugal, Reserva Nacional Pampa del Tamarugal - La Serena
Amerika Atsimo Shily La Serena
Adiresy: Ambassador Almonte, Tarapaca, Chilie;
Phone: +56 57 275 1055;
Datin'ny fanorenana: 1987.
Iray amin'ireo atleta voajanahary tsy dia hay hadinoina an'i Shily ny Pampa de Tamarugal National Wildlife Refuge. Mahavariana, voalohany indrindra, noho ny zavamaniry tsy mahazatra, izay azo antoka fa mahaliana ireo mpizahantany izay tia miala amin'ny natiora.
Famaritana ny tahiry
Ny toerana misy ny valan-javaboary dia tany lemaka an'efitra, izay mitovy anarana. Ao amin'ny faritra Tarapaca, any amin'ny faritanin'i Tamarugal. Ny faritr'io tahirin-tsarimihetsika io dia mahavariana be ary mitentina 102 000 hektara, misy zavatra voajanahary hita amin'ny haavo tena lehibe, izay 970 m.
Ny zaridaina dia ny fizarazarana ho sekta telo, fa ny zavamaniry ao amin'izy ireo dia tsy mitovy amin'ny an'ny hafa. Ny sekta dia antsoina hoe Sapiga, La Tirana ary Pintados. Ny tena mahasarika ny tahiry dia ny carob sy Tamarugo, izay mitondra tsara ny lohatenin'ny karatry ny fandraharahana ao amin'ny valan-javaboary.
Ny tena mampiavaka ny tamarugo dia ny hoe afaka mitombo ao amin'ny faritra iray ihany izy. Indray mandeha dia nesorina ireo hazo mba hahazoana vokatra, ka amin'izao fotoana izao dia karazana tsy fahita firy izy ireo. Ny haben'ny hazo dia kely, raha ny endriny dia toy ny kotsa. Tamarugo dia anisan'ny fianakavian'ny legum.
Ny National Reserve dia manana taha tsara indrindra ho an'ny fambolena karazana zavamaniry tsy fahita firy. Ny hazo dia manazava ny hazavana, fa tsy mandefitra ny lanezy, afaka mahatohitra ny hafanana miakatra hatramin'ny -5 ° C. Ho an'ny fitomboany dia heverina ho tsara ny faritra steppe, izay manavaka ny tahiry.
Ahoana ny fandehanana any amin'ny tahiry?
Ny natiora natokana ho an'ny natiora Pampa de Tamarugal dia misokatra isan-taona. Azonao atao ny manatratra izany amin'ny alàlan'ny fiarandalamby Arica - La Serena .
Fitomboana an'i David Bowie
Trano fanorenana vaovao
Ny zaridainan'ny vehivavy amin'ny felam-boninkazo
Ahoana ny fomba hanamainana ny palitao lava aorian'ny fanasana?
Famaritana ny placenta amin'ny fitondrana vohoka - ny soritr'aretina
The Hague - toetran'ny mpizahatany
Ahoana ny fomba hanamboarana fonosana taratasy?
Ahoana no hanafenana ny tsy fahombiazan'ny sary amin'ny akanjo?
Amin'ny kintan'ny fampisehoana tena izy - amin'ny couturier!
Fandaminana ny fanaka
Kalaina root - famindrana medikaly
Ny sipin dia manondraka holatra sy ranom-boasary ao anaty saosy saosy
Cryomassage amin'ny tarehy